Ruud van Nistelrooy oo hoos u dhigay Ronaldo, kaddib markii uu ammaan kala dul dhacay Messi – Gool FM
(Europe) 22 Okt 2019. Xiddigii hore xulka qaranka Holland ee Ruud van Nistelrooy ayaa amaanay kabtanka Barcelona ee Lionel Messi, isagoo sheegay inuu wax walba ka sameynayo kubadda cagta ee adduunka isla markaana uu ka sareeyo dhamaan ciyaartoyda kale xilfaltanka uu ka dhexeeyo.
Ruud van Nistelrooy ayaa u ciyaaray kooxda Real Madrid muddo seddex sano ah, isagoo u dhaliyay 64 gool, dabcan xiddiga reer Argantina ee Lionel Messi wuxuu ku wajahay kulamo badan oo El Clasico ah.
Kulanka ugu caansan ee El Clasico ay isaga hor yimaadeen labadan ciyaaryahan ayaa wuxuu ahaa ciyaar ku dhamaatay barbaro 3-3 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Barcelona iyo Real Madrid, kulankii lugta labaad horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2006-2007, xilligaas uu Lionel Messi dhaliyay saddexley, halka Ruud van Nistelrooy uu dhaliyay 2 gool.
Van Nistelrooy ayaa iska diiday in saaxiibkiis hore kooxda Machester United ee Cristiano Ronaldo uu la meel dhigo Messi, wuxuuna tilmaamay in xiddiga reer Portugal uu yahay kaliya gooldhaliye aad u wanaagsan, laakiin Messi lagu tilmaamo waxyaabo badan isla markaana uu leeyahay dhamaan astaamaha ugu muhiimsan ee ciyaartoyda waa weyn.
Haddaba wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay xiddigii hore xulka qaranka Holland ee Ruud van Nistelrooy waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ma jiro qof u soo dhowaan karta Lionel Messi, ii sheeg cidda ay noqon karto?”.
“Cristiano Ronaldo waa gooldhaliye fiican, Iniesta waa mid caqli badan, Saalax, Mané, Hazard iyo Mbappé waa ciyaartoy aad u fiican, laakiin Messi wuxuu ka sareeya dhamaantood”.
“Qofna ma gaari karto heerka Lionel Messi, wuxuu u muuqdaa inuu yahay ciyaaryahan ka soo baxay PlayStation”.
Modric oo shaaca ka qaaday AFARTA ciyaaryahan uu arko inay u qalmaan ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d'Or 2019